Sida loo RIP Films Online fudayd
> Resource > Video > Sida loo RIP Film ka Shabakadaha
Daawashada filimada online waa hab fiican oo in la dilo markii maalmaha fasaxa ah ama maalmaha fasaxa ah. Laakiin Wixii Classics kuwa, fikrad cajiib ah waxa ay noqon doontaa in ay iyaga waad dooxi ka websites si loo badbaadiyo ee faraha aad. Markaas waxaad iyaga ku daawan kartaa oo aan waqti lagu xidhin oo meel. Weli xoqidda madaxiinna oo isku dayaya in ay helaan xoogaa yar oo wanaagsan oo software si ay u caawiyaan? Ha hadda ka welwelin. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) xaq halkan si aad u adeegnaa waa. Waxaa dooxi karo filimada ka qaatay dhammaan websites caanka ah sida Hulu ama YouTube. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo filimada dooxay si qaabab kale in ay ku habboon kombuyuutarrada gacanta aad.
Bal aan marka hore u diyaar garoobaan in ay soo bixi ripper filimkan oo ku xidh on your computer. Ha iloobin in aad doorato version saxda ah ee computer. Aan hoos ku tutorial ah tallaabo-tallaabo ah oo version daaqadaha arko.
Fiiro gaar ah: Labada qeybood oo ku dhowaad shaqeeyaan si la mid ah. Wixii version Mac ah, fadlan si ay hage user tixraac.
1 Raadi filimada aad jeceshahay
Waxaad geli karaa website a film sida Hulu in browser ah sida IE, Firefox iyo Chrome. Ama in ka badan ku haboon, la furo website ku tab Online Video barnaamijkan la dhisay-in browser ah. Markaasay isku day inaad hesho mid ka mid ah film oo guji inuu u ciyaaro.
2 filimada Rip laba siyaabood
Marka filimka bilaabo ciyaaro, waxaad ka heli kartaa button Download ah sida ku cad sawirka soo socda. Riix badhanka iyo ripper filimka bilaabo shaqeeya.
Si kale waa in aad nuqulka url ee filim oo riix badhanka URL koollada. Waa mid aad u fudud, soo maaha? Waxaad dooxi kartaa filimo badan oo ay mid ka mid ah laba siyaabood. Oo waxaa barnaamijkan sidoo kale taageertaa Dufcaddii iyo breakpoint dooxeen.
3 badalo dooxay filimada in qaabab kale
Marka filimada waxaa lagu dooxay, ma aha dhammaadkii haddii aad rabto in aad iyaga u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo. Waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga loogu badalo. Iyada oo barnaamijkan, waa bey u fududayd. Raadi button loogu badalo xaga midig ee video ah oo guji. Markaas doortaan qaab ama qalab sida iPad in ay qaab wax soo saarka. Riix OK dhammayn shaqadan.
Tani waa dhamaadka dooxeen film iyo diinta. Haddii aad qabto wax badan files film deegaanka, aad dajiyaan karaa in barnaamijkan si ay u caawiyaan maareeyo inta aad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi si ay ula qabsadaan amarka. Barnaamijku wuxuu ku qalabeysan yahay ciyaaryahan Ilaaha Qaadirka ah si aad u ciyaaro filimada la qaab kasta. Hel xirmo dhan this on your computer iyo aad marna ka qoomameyn doonto.